कुमाख मालिका गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कुमाख मालिका गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी
शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:५१ मा प्रकाशित !
सल्यान , जेठ ५ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुमाख मालिका गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्रका दिलमाया विएमले ३ हजार ६ सय ७३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेकपा एमालेका भैरव शाह २ हजार १ सय २९ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
यस्तै उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका डिल्लीराज जैशी विजयी हुनु भएको छ । उहाँले ३ हजार ८ सय १८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी एमालेका शान्ति चन्द २ हजार १ सय ४५ मत प्राप्त भएको छ ।
वडा न १ मा काँग्रेसका गोपाल बुढाथोकी (सदस्य बाहेक अध्यक्षमात्र )वडान २ मा एमालेका शेर बहादुर बुढाथोकी , वडान ३ माओवादी केन्द्रका चित्र बहादुर बुढाथोकी, वडा न ४ मा माओवादीका तिलविर बुढाथोकी, वडान ५ मा हरिप्रकाश बुढाथोकी, वडा न ६ माओवादी केन्द्रका विरबल शर्मा र वडा न ७ मा माओवादी केन्द्रकै तुलाराम बोहरा निर्वाचित हुुनु भएको छ ।
सल्यानमा एक मात्र महिला विजयी
यस्तै ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको सल्यानमा एक स्थानमा मात्र महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कुमाख गाउँपालिकामा मात्र महिला उम्म्मेदवारले जितेका हुन । माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्नु भएकी दिलमाया वि एमले पुरुषसँग भिडेर सहजै जित हासिल गर्नु भएको छ । उहाँले ३ हजार ६ सय ७३ मतले जित्नु भएको छ । विएम शहिद परिवार समेत हुनु हुन्छ । शसस्त्र जनयुद्धको समयमा उहाँको श्रीमानको शहादत भएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: गोली प्रहार गरी भरतपुरमा लुटपाट
NEXT POST Next post: पुनः मतगणना सुरु गर्नेबारे छलफल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:५१